'ဥပါယ်တံမျဉ်' ဇာတ်ကားနဲ့ ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိခဲ့တဲ့ ဇဏ်ခီ - Yangon Media Group
ဒီတစ်ပတ် Cover Star ကို တော့ ‘ဥပါယ်တံမျဉ်’ ဇာတ်ကားနဲ့ ပရိသတ် အခိုင်အမာရရှိခဲ့တဲ့ သရုပ် ဆောင် ဇဏ်ခီကို ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့ပါ တယ်။ လတ်တလောမှာ ပရိသတ် ကြားရေပန်းစားနေတဲ့ ဇဏ်ခီကို 8days စာမျက်နှာထက်မှာ တွေ့မြင် ရတဲ့အတွက် ပရိသတ်တွေလည်း ကျေနပ်အားရလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည် မိပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ- အောင်ဇော်(Love Space) , Retouch- ညီညီလှဘော် , မိတ်ကပ်-Lin Linn (Make Up Artist), ဝတ်စုံ- My Fashion USA , Location- BLACK CANYON (COFFEE & EATERY)
Q. ‘မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ’ ဇာတ်ကား အတွက် ဘယ်လောက်မျှော်လင့် ထားလဲ။
A. ကျွန်တော် အရမ်းကြီးမ မျှော်လင့်ရဲဘူး။ ‘ဥပါယ်တံမျဉ်’ တုန်း ကလိုပဲ အများကြီးကြိုးစားထား တယ်။ ပရိသတ်တွေ ဝန်းရံပေးရင် တော့ ပျော်ရမှာပေါ့။
Q. ‘မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ’ ဇာတ် ကားက ‘ဥပါယ်တံမျဉ်’ ဇာတ်ကားကို ကျော်နိုင်ပါ့မလား။
A. မတ်လ(၁၆)ရက်နေ့ ရုံတင် ရင် ကြည့်ရမှာပေါ့။ ကျွန်တော်အ ရမ်းလည်း ရင်တုန်နေပါတယ်။ အ ရမ်းလည်းကြိုးစားထားကြတဲ့အတွက် ကြောင့်ပါ။
Q. ‘မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ’ဇာတ်ကား က ပရိသတ်မျှော်လင့်သလောက် သူတို့ဆန္ဒကို ပြည့်နိုင်ပါ့မလား။
A. အဲဒီအပိုင်းကိုတော့ ယုံ ကြည်တယ်။ ‘ဥပါယ်တံမျဉ်’လိုပဲ ကျွန်တော်တို့ ဟာကွက်မရှိအောင် လုပ်ထားတယ်။ တစ်ခုပဲ ပရိသတ် ကိုတောင်းဆိုချင်တာက ဇာတ်လမ်း အမျိုးအစားမတူတဲ့အတွက် ‘ဥပါယ် တံမျဉ်’ လိုမျိုးတော့ ဖြစ်မှာမဟုတ် ဘူး။ ဇာတ်လမ်း အမျိုးအစား နောက်တစ်မျိုး၊ စတိုင်လ် လုံးဝကွဲ တယ်။ ကားပြီးသွားရင် ပြည့်ဝတဲ့ ခံစားချက်နဲ့ တွေးစရာတွေ အများ ကြီးဖြစ်လာမယ်လို့ ယုံကြည်ပါ တယ်။
Q. ‘ဥပါယ်တံမျဉ်’ မှာ သက် မွန်မြင့်လို ဝါရင့်သရုပ်ဆောင် ပါခဲ့ ပေမယ့် ‘မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ’ မှာက အ သစ်တွေချည်းပဲဆိုတော့ စိုးရိမ်မှုတွေ များလား။
A. ‘ဥပါယ်တံမျဉ်’ က အကုန် လုံးနီးပါး မျက်နှာသစ်တွေပါပဲ။ ကံ ကောင်းသွားတာတစ်ခုက လူတွေ လက်ခံနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ဇဏ်ခီအ နေနဲ့ဆိုရင် ပရိသတ်တွေ အစိမ်း သက်သက်ကြီးတော့ ဖြစ်မနေတော့ ဘူး။ အသစ်တွေချည်းပဲဖြစ်နေတာ ထက်စာရင် နည်းနည်းလေးသက် သာသွားတယ်လို့ထင်တယ်။
Q. ‘မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ’ ရိုက်တုန်း က ဘယ်လိုအမှတ်တရတွေ ရှိခဲ့ လဲ။
A. ‘မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ’ ရိုက်တုန်း က မတ်လ၊ ဒီလိုကာလမှာ ရိုက်ခဲ့ တာ။ ပထမဦးဆုံးမန္တလေးမှာ သွားရိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ပုဂံ။ အဲဒီ အချိန် တုန်းက အပူဆုံးကာလဆို တော့ ဃမနတ တွေအနေနဲ့လည်း အ ရမ်းရုန်းခဲ့ရတယ်။ သရုပ်ဆောင်တွေ အနေနဲ့လည်း ရပ်လိုက်၊ ချွေးသုတ် လိုက်၊ လေမှုတ်လိုက်နဲ့ တော်တော်ပူ တဲ့ အချိန်ဆိုတော့ တော်တော်လေး ကို လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။
Q. ‘ဥပါယ်တံမျဉ်’ တုန်းကလို ပဲ JCGV ရုံတွေမှာပဲ ရုံတင်ဖြစ်သွား တာကရော။
A. ဒီကားကိုလည်း JCGV , Mega Ace ရုံတွေမှာပဲ တင်ဖြစ် တယ်။ တခြားရုံတွေမရလိုက်ဘူး။ မရလိုက်တာကလည်း သူတို့လက်ထဲ မှာ ကားပေါင်း (၃ဝဝ)နီးပါးလောက် ရှိတယ်။ ကြည့်ပေးမယ်လို့ ပြောပေ မယ့် ဘယ်လောက်ထိ ဆက်စောင့် ရမလဲ မသိဘူး။ အရှေ့ပိုင်းမှာလည်း တော်တော်စောင့်ခဲ့ပြီးပြီ။ ‘မုဒြာရဲ့ ခေါ်သံ’ ကို လေးနှစ်နီးပါးတန်းစီပြီး တော့မှနောက်ထပ် ထပ်မစောင့် နိုင်တော့ဘူး။ ပရိသတ်တွေ က လည်းကြည့်ချင်နေပြီ။ လေးနှစ်ဆို တဲ့ ကာလကလည်း တော်တော် ကြာပြီ။ ဒီထက် ထပ်စောင့်ရင်လည်း မကောင်းတော့ဘူး။ အဲဒါကြောင့် ရတဲ့ရုံကို ဆွဲပြဖြစ်သွားတာပါ။
Q. ရတဲ့ရုံ ဆွဲပြခဲ့တာက ရှေ့က ကားနဲ့ ပရိသတ်အာရုံကို ရထားလို့ လား။ စီးပွားရေးကြောင့်လား။
A. အကုန်လုံးက အကြောင်း ဖန်လာတယ်လို့ပဲ ပြောရမှာပါ။ ‘ဥ ပါယ်တံမျဉ်’ ပေါက်တာကြောင့် လည်း အများကြီးပါပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အရှိန်ရှိထားတော့ ‘မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ’ ဆက်ကြည့်လို့ရရင် ဘယ်လောက် ကောင်းမလဲဆိုတဲ့ တောင်းဆိုသံတွေ ရှိလာလို့ ပြဖြစ်သွားတာပါ။
Q. Cover ရိုက်ရတဲ့ ခံစား ချက်။
A. ဒီနေ့ Photo Shoot မှာ ပျော်တယ်။ Studio ကြီးမဟုတ် တာကြောင့် လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ Free Style လေး ရိုက်ရတဲ့အတွက် ပျော်တယ်။